Ukuhlafuna Usekela Gum
Product Name: soy qwaba
Ukuzikisa soya ngeeProteni yenziwa NON-yeMfuzo zesoya.
Q1: Ndinomdla kwiimveliso yakho, kodwa ngoku mna eChina, ngaba thembisa iilebhile yakho ezweni lam?
Q2: Ndingenza njani ukufumana iisampulu?
Q3: Ngaba kunokwenzeka ukuba Kwanesilunga iilebhile kunye kuyilo yam?
Q4: njani ndinikhululele intlawulo kuwe?